Munchy's Sugar Cracker 390gm (12pcs) ~ ICT.com.mm
HomeMunchy's Sugar Cracker 390gm (12pcs)
Enjoy simple pleasures withacracker that is coated in sugar for the sweetest experience. အချိုကဲတဲ့အရသာကို နှစ်ခြိုက်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Munchy’s Sugar Cracker မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ သကြား Cracker ဖြစ်တဲ့အတွက် Cracker ပေါ်မှာ အချိုအရသာထူးကဲတဲ့ သကြားကို ဖုံးအုပ်ပေးထားပါတယ်။ Mug ခွက်ထဲမှာ... [Learn more]
Enjoy simple pleasures withacracker that is coated in sugar for the sweetest experience.
အချိုကဲတဲ့အရသာကို နှစ်ခြိုက်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Munchy’s Sugar Cracker မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ သကြား Cracker ဖြစ်တဲ့အတွက် Cracker ပေါ်မှာ အချိုအရသာထူးကဲတဲ့ သကြားကို ဖုံးအုပ်ပေးထားပါတယ်။ Mug ခွက်ထဲမှာ ကွက်တိဖြစ်နေအောင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် စားခါနီးတိုင်း ချိုးဖဲ့နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ လှလှပပနဲ့ စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးပေးထားတဲ့အတွက် အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ စားသုံးဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Cracker မုန့်ထုပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက် ၁၂ ခု ပါဝင်ပါတယ်။